द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | जनवरी 25, 2020 | कार्यालय
विभिन्न कारणका लागि, व्यवसायका सदस्यहरूलाई आवाश्यक पर्न सक्छ टाढाबाट सहयोग गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, स्वतन्त्र सदस्यहरु हुन सक्छ वा एक हडताल पछि परिसर बन्द हुन सक्छ। कर्मचारीहरू आफ्नो काम सामान्य रूपमा जारी राख्न र एक अर्कासँग कुराकानी गर्न सक्षम हुनको लागि, स्लेक जस्ता संचार उपकरणको प्रयोग आवश्यक छ।
सुस्त के हो?
स्लक एक अनलाइन प्लेटफर्म हो तिनीहरूलाई अनुमति दिँदै एक कम्पनी को सदस्यहरु बीच सहयोगी संचार। यो कम्पनीको आन्तरिक ई-मेलिंगको लागि अधिक लचिलो विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। यद्यपि यो उत्तम छैन र केहि आलोचनाहरू यसको बनाउन सकिन्छ, यसले अधिक र बढी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्दैछ।
स्ल्याकले वास्तविक समयमा सूचना संचार गर्न सम्भव बनाउँदछ, र यो ईमेलको तुलनामा सरल तरिकामा। यसको सन्देश प्रणालीले तपाईंलाई दुबै सामान्य र निजी सन्देशहरू पठाउन अनुमति दिन्छ। यसले धेरै संभावनाहरू पनि प्रदान गर्दछ जस्तै फाइल साझेदारी (पाठ, छवि, भिडियो, आदि) र भिडियो वा अडियो संचार.
यसलाई प्रयोग गर्नको लागि, तपाईले गर्नुपर्ने भनेको प्लेटफर्ममा जडान र खाता सिर्जना गर्नु हो। त्यसपछि तपाइँसँग Slack को नि: शुल्क संस्करणमा पहुँच हुनेछ जुन पहिले नै धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। त्यसपछि तपाईले निमन्त्रणा पठाउन सक्नुहुन्छ इमेल तपाईंले आफ्नो कार्यसमूहमा थप्न चाहनुभएको सदस्यहरूलाई।
प्लेटफर्मको राम्रोसँग सोच र एर्गोनोमिक डिजाइन छ। राम्रोसँग काम गर्न सक्षम हुन, तथापि, त्यहाँ केहि व्यावहारिक सर्टकटहरू सम्झनका लागि छन्, तर तिनीहरू धेरै जटिल छैनन्। थप रूपमा, यो स्ल्याकमा कम्प्युटर, स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटको साथ काम गर्न सम्भव छ।
रिड माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्ट: यसको उपयोगिता र यसको कार्यक्षमता बुझ्नुहोस्।
सुस्तसँग कुराकानी गर्नुहोस्
प्लेटफर्ममा कम्पनीले सिर्जना गरेको प्रत्येक कार्यक्षेत्रमा, "चेनहरू" भन्ने विशेष विनिमय क्षेत्रहरू सिर्जना गर्न सम्भव छ। विषयवस्तुहरू उनीहरूलाई तोक्न सकिन्छ कि तिनीहरू एक कम्पनी भित्र गतिविधि अनुसार समूहबद्ध गर्न सकिन्छ। यसैले लेखा, बिक्री, आदि को लागी एक श्रृंखला सिर्जना गर्न सम्भव छ।
यो एक चेन पनि सिर्जना गर्न सम्भव छ जसले सदस्यहरूलाई व्यापार गर्न अनुमति दिनेछ, चाहे पेशेवर हो वा होइन। ताकि त्यहाँ कुनै गडबडी छैन, प्रत्येक सदस्यसँग मात्र उसको गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित च्यानलमा पहुँच हुनेछ। उदाहरण को लागी, एक ग्राफिक डिजाइनर को मार्केटिंग वा बिक्री श्रृंखला को उपयोग हुन सक्छ कसरी व्यापार संचालित मा निर्भर गर्दछ।
जो च्यानलमा पहुँच गर्न चाहानुहुन्छ पहिले अनुमति हुनुपर्दछ। समूहका प्रत्येक सदस्यले छलफल श्रृंखला पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। जे होस्, संचारलाई भ्रमित हुनबाट बचाउन यो सुविधा अक्षम गर्न सम्भव छ।
सुस्तमा संचार गर्नको लागि बिभिन्न च्यानलहरू।
सञ्चार ways तरीकाले स्थापना गर्न सकिन्छ। पहिलो वैश्विक विधि हो जुन जानकारी उपस्थित कम्पनीका सबै सदस्यहरूलाई पठाउन अनुमति दिन्छ। दोस्रो भनेको खास श्रृंखलाका सदस्यहरूलाई मात्र सन्देशहरू पठाउनु हो। तेस्रो हो निजी सन्देशहरू पठाउनु, एक सदस्यबाट अर्कोमा।
सूचनाहरू पठाउन, त्यहाँ केहि सर्टकटहरू थाहा पाउनुपर्दछ। उदाहरणको लागि, एउटा श्रृंखलामा एक अद्वितीय व्यक्तिलाई सूचित गर्न, तपाईंले @ टाइप गर्नुपर्नेछ तपाईंले खोज्नु भएको व्यक्तिको नाम पछि। एउटा श्रृंखलाका सबै सदस्यहरूलाई सूचित गर्न, त्यहाँ कमान्ड @ नाम-डे-ला-चेन छ।
तपाइँको स्थितिको कलेजलाई सूचित गर्न (अनुपलब्ध, व्यस्त, आदि), त्यहाँ "/ स्थिति" आदेश छ। अन्य थप रमाईलो आदेशहरू उपस्थित छन्, जस्तै "/ giphy" च्याट जसले तपाईंलाई च्याट GIF पठाउन अनुमति दिन्छ। तपाईको इमोजीहरू अनुकूलित गर्न वा रोबोट (स्ल्याकबोट) सिर्जना गर्न पनि सम्भव छ जुन केहि सर्तहरूमा स्वत: प्रतिक्रिया गर्दछ।
स्लकको पक्ष र विपक्ष
स्ल्याकले सुरुबाट धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ ई-मेलिंगको संख्यामा कमी कम्पनीको आन्तरिक। थप रूपमा, आदानप्रदान गरिएका सन्देशहरू अभिलेख राखिन्छन् र सजिलै खोज बारबाट फेला पार्न सकिन्छ। केहि अधिक वा कम उपयोगी विकल्पहरू # ह्यासट्यागको उदाहरणको साथ उपस्थित छन् जुन तपाईंलाई सजिलैसँग टिप्पणी भेट्टाउन अनुमति दिन्छ।
स्मार्टफोनमा खोल्न सकिन्छ, यसले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ जहाँसुकैबाट काम गर्नुहोस्। थप रूपमा, यसले ड्रपबक्स, स्काइप, गितहब जस्ता धेरै उपकरणहरू समाहित गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ ... यी एकीकरणहरूले तपाईंलाई यी अन्य प्लेटफर्महरूबाट सूचनाहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। स्ल्याकले एक एपीआई प्रदान गर्दछ जुन प्रत्येक कम्पनीलाई प्लेटफर्मको साथ यसको अन्तर्क्रियाहरू निजीकृत गर्न अनुमति दिन्छ।
सुरक्षाको सर्तमा, प्लेटफर्मले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूको डेटा सम्झौता नगरिएको सुनिश्चित गर्दछ। त्यसैले त्यहाँ इन्क्रिप्ट डाटा तिनीहरूको स्थानान्तरण र उनीहरूको भण्डारणको बखत। प्रमाणीकरण प्रणाली उन्नत छन्, र सकेसम्म धेरै ह्याकि ofको जोखिमलाई सीमित गर्दछ। यसैले यो एक मञ्च हो जहाँ सञ्चारको गोपनीयतालाई सम्मान गरिन्छ।
जहाँसम्म स्ल्याकका धेरै फाइदाहरू भएजस्तो देखिन्छ, यसले सबैलाई अपील गर्दैन। उदाहरण को लागी, यो प्लेटफर्म मा सन्देशहरु र सूचनाहरु संग अभिभूत गर्न सजिलो छ। थप रूपमा, यो युवा स्टार्ट-अपको नजिकको भावनामा डिजाइन गरिएको थियो। अधिक परम्परागत कम्पनीहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा समाधानको प्रस्ताव द्वारा प्रदान गर्ने छैन।
स्ल्याक: परिचय र प्रस्तुतीकरण # १
सुस्त: बिभिन्न संस्करण # २
स्ल्याक: टोली # Create सिर्जना गर्नुहोस्
सुस्त: च्यानलहरू4सिर्जना गर्नुहोस् र व्यवस्थित गर्नुहोस्
SAP MM लेनदेन कोड #6प्रयोग गरीयो
स्लक अपलोड गर्नुहोस् एक फाईल, छवि, भिडियो, लिंक # a
स्ल्याक: गुगल ड्राईव वा ड्रपबक्स कागजात, युट्यूब भिडियो # # आयात गर्नुहोस्
मोबाइल # १० को लागी सुस्त
सुस्त: अनुस्मारकहरू ११ ११ सिर्जना गर्नुहोस्
सुस्त: पोल # १२ प्रयोग गर्नुहोस्
स्ल्याक: गुगल क्यालेन्डर # १g एकीकृत गर्नुहोस्
टीमहरूमा काम गर्नुहोस् र टाढा टाढा स्ल्याकसँग। वास्तविक समयमा संचार गर्नुहोस् मई 17th, 2020Tranquillus
अघिल्लोहडतालको क्रममा TeamViewer को साथ टाढाबाट कार्य गर्नुहोस्
निम्नबिदाका बिभिन्न प्रकार, कहिले र कसरी उनीहरूको फाइदा लिन?